ओली भारत फकाउन तल्लीन, भारतले वेट एण्ड वाचको रणनीति – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ ओली भारत फकाउन तल्लीन, भारतले वेट एण्ड वाचको रणनीति
ओली भारत फकाउन तल्लीन, भारतले वेट एण्ड वाचको रणनीति
पुलेसो १५ माघ, २०७७, बिहीबार १०:०२
नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि तम्तयार भइरहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतलाई रिझाउन खोजिरहेको खुलासा भएको छ ।
एक उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले आफ्ना एजेन्ट भारत पठाएका छन् ।
ओली बैंकक उपचारका लागि जानुअघि नै एजेन्ट खटाएका थिए । तर त्यो एजेन्टबाट नभइ ओली प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भएपछि ओली उपचार गर्ने समय मिलाएर बैंकक पुगेका थिए ।बैंककमा पनि पूरा कुरा नटुंगिएकाले ओलीले फेरि एजेन्ट भारत पठाएका हुन् ।
ओली पक्का प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । बाम गठबन्धनको साथले नै प्रधानमन्त्री बन्न पुग्छ । तर उनले कुरो बुझे कि बीचकै जुनसुकै बेला गठबन्धन टुट्न सक्छ ।
तसर्थ ढुक्कले सरकार संचालनका लागि उनले भारतबाट गाढा हरियो झण्डा खोजेका छन् ।
हुनत प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक टेलिफोन गरेर शुभकामना तथा बधाइ दिइसकेका छन् ।
ओलीले पनि बुझेका छन् कि बारबार मोदीले फोन गरेर के चाहन्छन् ?
त्यसैले यो विषय मिलाएर सत्ताको बिंडो थाम्नका लागि दिल्ली दरबारलाई रिझाउन चाहन्छन् ।
के गर्दैछन् ओली ?
ओलीले आफू पक्का पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कतैबाट अवरोध नआओस् भन्ने चाहन्छन् ।
त्यसैले उनले चीनबाट स्वीकृति लिइसकेको स्रोत बताउँछ । अब भारतबाट लिन बाँकी छ । चीनकै सल्लाहमा ओलीले भारतलाई रिझाउन खोजिरहेका छन् ।
ओलीले भारतकै रायमा मधेस केन्द्रीत दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाललाई सरकारमा समेट्न खोजिरहेका छन् ।भारतले यसलाई सकारात्मक लिए पनि त्यतिमात्र उसको स्वार्थ हैन भन्ने ओलीले बुझेका छन् ।
के हुन्छ राजसंस्था र हिन्दू राज्य ?
भारतको अर्को मुख्य इच्छा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु हो । मोदी पुनः नेपाल विश्वकै एकमात्र हिन्दू राज्य भएको देख्न चाहन्छन् ।ओली यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन तयार भएको देखिन्छ । त्यसैगरी राजसंस्थाको मुद्दा पनि गम्भीर भएर अगाडि बढिरहेको छ ।
राजसंस्थालाई विशेष स्थान दिन ओली तयार भएको बुझिन्छ । ओली तयार भए पनि प्रक्रिया जटिल भएकाले अलमल बढेको छ ।त्यसैले त ओलीले गरेको अलमलका कारण भारतले वेट एण्ड वाच अथात् पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको स्रोत बताउँछ ।
तर ओली भारत फकाउन तल्लीन रहेको बुझिन्छ ।
पार्टी एकताले पनि उनलाई केही असहज बनाएको छ । ओलीले बैंककमा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहसंगको भेटका बारेमासमेत पार्टीको बैठकमा उल्टो सन्देश दिएका थिए ।
अन्जानमा भेट भएको बताएर कुरो गोप्य राख्न खोजेको देखिए पनि उनको त्यो कलाप्रति धेरै नजिक भइसकेको बुझ्न सकिन्छ ।